Ciidanka XDS oo raashin gar gaar ah gaarsiiyay magaalada Buurweyn ee G/Hiiraan – Radio Muqdisho
Ciidanka XDS ayaa ku guuleeystay iney raashin gaar gaar ah gaarsiiyaan dad ay maleeshiyaadka Shabaab ku go’doomiyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan.
Cutubyo ka tirsan ciidanka XDS oo ay wehliyaan kuwa AMISOM oo maalmihii u dambeeyay howlgallo ka waday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ku guuleeystay iney raashin gar gaar ah geeyaan magaalada Buurweyn, oo ay dhawaan ka xoreeyeen maleeshiyaadka Shabaab.
Howlgalkan oo ka bilowday degmada Jalalaqsi ayaa ujeedadiisu aheyd sidii loo furi lahaa wadada u isku xirta Jalalaqsi iyo Buulobarde oo ay ku jireen maleeshiyaadka Shabaab, si loo gudbiyo kolonyo gaadiid ah oo raashin gar gaar ah u sidday degmada Buulo barde iyo deegaano hoos yimaada.
Ciidamada ayaa lagu soo waramayaa iney si nabad gelyo ah, raashinkaasi ugu qeybiyeen dadka ku dhaqan magaalada Buurweyn, kuwaas oo maleeshiyaadka Alsbabaab ay muddo dheer ka hortaagnaayeen in loo gudbiyo gar gaar ay dowladda federaalka ugu talagashay.
Cirfo "Mashaariic dib loogu dhisayo adeegyadii bulshada ayaa gobolka ka socda"